Wepamusoro gumi maitiro anokanganisa nekushandura misangano muna 10
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » Wepamusoro gumi maitiro anokanganisa nekushandura misangano muna 10
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Mushure memwedzi yakawanda yekubuda kunze kwemusha uye kubatana nevatinoshanda navo nevatengi zvirinani, pane chishuwo chekuuya pamwechete, kubatanidzazve, kuvakazve timu uye kumutsidzira mweya wechikwata
Kuungana kwemakambani mu2021 kunonyanya kuve kwedunhu kutyaira-kusvika panguva ino, asi vaongorori vari kuona nhabvu-mumisangano ichiitika mukati mekupedzisira kwegore
Ichikurumidza kuve muyero mutsva mukugamuchira vaeni, tekinoroji isingataure yakamisidzana mukati memwedzi yakawanda yadarika uye ichapfuura denda iri
Munzvimbo dzakawanda, mirau yenyika irikutadzisa kukura kwezviitiko kusvika padiki sevanhu gumi kusvika gumi nevashanu, saka zvinonzwisisika kuti saizi yeboka muna 10 idiki
Nyanzvi dzeindasitiri dzakazivisa gumi reMitambo yepamusoro iri kukanganisa nekushandura misangano muna 2021.
Kana paine chinhu chimwe chemisangano chikamu chakadzidza mu2020, ndiyo dudziro yechokwadi yezvinoreva kumbomira uye kutenderera, uye nekushingisa uye kugadzira vanhu vari mumisangano indasitiri vari. Nekutarisira kwakawanda kwejekiseni muChirimo, Nyanzvi dzeindasitiri dziri kuona zviratidzo zvekutanga zvemisangano pamwe nekuungana. Vanoongorora vanoona 2021 seyakare-yekutenderera gore rinozotangisa kupora kwakanyanya kwemaindasitiri emisangano.
Trend 1) Mugwagwa Wekudzosa
Iyo indasitiri iri kuratidza tariro, kekutanga kekutanga kubva apo denda rakatanga! Mishonga yekudzivirira zvirwere iri kupihwa zvikamu zvinowedzera zvevanhu, ichisimudzira tarisiro kumusangano indasitiri inodzoka mukati mekota yechitatu neyechina yegore rino. Sekureva kwemisangano inotungamira, zviitiko uye wekugamuchira vaeni tekinoroji, kusvika parinhasi mu2021kusangana kweRFPs kwasvika pamatanho epamusoro kubva munaKurume 2020. Sezvo nzvimbo dzinotanga kuvhurika zvakachengetedzeka zvakachengetedzeka, saka saizi uye huwandu hwekusangana kweboka.
Maitiro 2) Misangano Yekufamba Mugwagwa
Kuungana kwemakambani mu2021 kunonyanya kudhiraivha kwedunhu kusvika panguva ino, asi nyanzvi dziri kuona misangano inobhururuka mukati megore rekupedzisira regore. Misangano yeHybrid inoramba iri sarudzo yakakosha yekusanganisa zvikwata zvese mukati memusangano, nevanoenda padhuze nekutyaira mukati uye avo vanoenda kure kuenda kunenge nekuda kwekutya kwekufamba, kana sevamwe vangangoda kugara pamba nekuda kwemhuri kana zvikonzero zvehutano. Izvo zvakati, kudiwa kwemisangano yakasanganiswa hakuna kusimba sezvingave zvaitarisirwa. Zvinoita sekunge kuda kuungana mumunhu kunopfuura misanganiswa yakasanganiswa, uye panogona kunge paine kuneta kugara mukati nekubatana kuri kure.
Maitiro 3) Technology Mutyairi
Tekinoroji inogona kugadzira - kana kutyora - chiitiko chemusangano, uye vanoronga vanoziva izvo zvirinani kupfuura chero chimwe. Saka, ndechipi chinonyanya kukosha tekinoroji chikumbiro uye kunetsekana pakati pevarongi kwechiitiko chakanakisa chemusangano mu2021? Bandwidth! Bandwidth ndiyo tekinoroji yekutanga nhamba 1, 2 uye 3! Mushure meizvozvo mukana wepamoyo wekusangana wepfuma, uye rakazvipira tekinoroji rutsigiro timu inowanika panguva yekuziva mumusangano wese.
Trend 4) Gore reSMERF
Uye kwete zvisikwa zvidiki zvebhuruu zvatakakura tichiona paterevhizheni yeruzhinji! Mumwe angafunga kuti chikuru pharma yaizotonga mu2021, kana tech indasitiri, kana iyo inishuwarenzi kana yezvemabhizimusi indasitiri yaizotonga sechikamu chakakosha cheindasitiri ichiendesa ruzhinji rwemibvunzo nemisangano. Asi kwete gore rino. Muna 2021, zvese ndezvebhizimusi reSMERF, iine kusimbisa kwakanyanya pamisangano yemagariro, edzidziso uye yechitendero!
Maitiro 5) Usabate!
Ichikurumidza kuve muyero mutsva mukugamuchira vaeni, tekinoroji isingataurike yakaungana mukati memwedzi yakawanda yadarika uye ichapfuura denda iri. Izvo zvave kutarisira kwevarongi uye kusangana nevashanyi, yakagadziriswa nehungwaru runhare kugona pakutarisa uye kuongorora. Kubva pakusvika pakupinda mukamuri yevaeni kuenda kunyoresa musangano uye ajenda dzemusangano kumasevhisi emusangano yekudyira nemamenyu chaiwo ekuraira kudya kwemangwanani, masikati, kudya kwemanheru, zvinwiwa kana sevhisi yekamuri, tekinoroji isingataurike iri pano yekugara!
Maitiro 6) Kudya kwemanheru kwakafungidzirwa
QR makodhi nemamenyu asingataure, aipinda mabuffets, akasarudzika emenu menyu, iyo yekudzoreredzwa kweiyo la carte bhokisi yekudya iine gourmet salads, grilled shrimp ine orzo, uye iyo, mukuwedzera kune yakasimbiswa nyowani yekudya chikafu uye tudyo, inogona kuperekedzwa kumeso kumeso, mvura yakabhoderedzwa uye ma sanitizers emaoko mukati mebhokisi. Zvimwe zvivakwa zviri kutosimudza bhokisi rekudya kumabhokisi emafuro panzvimbo pematafura emafuro. Yakasimba sarudzo inosara, zvakadaro, kune yakapihwa chikafu, kana yakashandurwa buffets ine yakasarudzika yakarongedzwa sarudzo, uye vekugadzirira vashandi-vanoshandira inopisa uye inotonhorera sarudzo zvese kumashure kwekuchengetedza plexiglass. Tichifunga nezve nharaunda yazvino, zvivakwa zviri kugarisa vaenzi vemusangano munzira ipi neipi yavanogona –kugadziridza kune zvavanofarira zvevatengi, izvo zvinogona zvakare kusanganisira bento yekudya mabhokisi uye mabhokisi ehors d'oeuvres, pamwe nekusiya-yekudyira mumakamuri evaenzi. Eco inonzwisisika seyakamboitika, imwe neimwe yakarongedzwa chikafu chinoratidzwa mune dzakakomberedzwa eco-hushamwari midziyo.
Trend 7) Kugadzira, Yemunharaunda & Sustainable-Zvimwe Zvinhu Hazvimbo shanduke!
Muna 2021, kugona, kuravira uye eco-kukoshesa zvakakosha zvakakosha kune vanoronga nevashanyi – denda harina kuchinja izvo zvinoita kuti kudya kwemanheru kunakidze, kusakanganwika, kugadzirirwa zvine mutsigo uye kutaurwa pamusoro pemwedzi mitanhatu gare gare. Zvikwata zvekudya zvinoramba zvine shungu dzekupa zvekudya zvemuno uye zvinogara zviripo – kwete zvekungotsva chete asi kutsigira varimi vemuno nevanochenesa panguva ino yakaoma. Kurima kune forogo zviitiko zvekudyira kwakakosha nhasi sezvavakamboita! Mumatunhu ese ekudyira kwekunze, nevatungamiriri munzvimbo dzekuchamhembe vachironga mamenyu emuchando ane moyo wakashanda munzvimbo dzakakura dzekunze dzakakomberedzwa nemakomba emoto nemidziyo, zvichigonesa zvakachengeteka, zvinokwezva uye zvekudyidzana zviitiko zvekudyira pasi penyeredzi… kazhinji zvichizobatana nemweya-unodziya siginecha zvinwiwa Kusvuta Bourbon Manhattan's uye Old Fashioned cocktaileja.
Trend 8) Saizi Nyaya
Munzvimbo dzakawanda, mirau yenyika irikutadzisa kukura kwezviitiko kusvika padiki pevanhu gumi kusvika gumi nevashanu, saka zvinonzwisisika huwandu hwepakati hweboka muna 10 idiki. Nedzimwe nzvimbo dzinoenda dzichideredza zvirambidzo zvavo, zvisinei, tiri kuona zvikumbiro zvakakura zveboka zve15 - 2021 vashanyi, kubhuka pazvivakwa zvakakura zvinopa nzvimbo yakakura yekuparadzaniswa kwenzanga, uye dzimwe nzvimbo dzinopihwa kunze kwenzvimbo huru yekugara yenzvimbo yekushamwaridzana nenzvimbo diki dzeboka. , uye nesarudzo dzekuzorora dzinopihwa zvirinani kuitira kuti vashanyi vagone kuchinjira mukubuda kwesarudzo yavo. Misangano iri kubhuka muna 50 inowedzera kwemazuva maviri paavhareji, izvo zvisina kunyanyo fanika kune apfuura makore. Musangano mapakeji emitengo ari kubata, paavhareji, kune avo vakataurirana mu100 kuti varambe vachikwikwidza uye kuhwina bhizinesi. Zvivakwa zviri kugadzirira misangano mizhinji kuti ubhuke miniti yekupedzisira kwazvo mukati megore rose.
Trend 9) Maonero Matsva!
Kusangana kunze kwakave chiitiko chinonakidza mumakore mashoma apfuura. Muna 2021, icho chinodikanwa. Nzvimbo dzekunze dziri kugadzirwa dzavasipo parizvino: chivanze chebhawa, nzvimbo dzakasvibirira tsangadzi uye mahombekombe ane jecha dzave dzimba dzekusangana dzemapoka akakura, sezvakaita mataresitorendi, madhishi edziva, matumba ekunze nemakamuri ane tende achangobva kuiswa ayo anofungidzira "echinyakare. ”Imba yemusangano gore rino. Adirondack macheya akamira-ins yezvigaro zve ergonomic, zvinotakurika kupisa zvinhu zvinounza kudziya kumakamuri ekunze munzvimbo dzekuchamhembe. Pazvinenge zvakakodzera, plexiglass inopa mumwe mutsetse wekuchengetedza. Uye, yekamuri yemusangano maonero haana kumbobvira ave nani!
Trend 10) Vabatsiri Mukuronga
Mitauro yemusangano wechibvumirano ndipo panorovera rabha mugwagwa muna 2021. Vazhinji vanoronga havachadi nezve kudiwa kwekuchinja-chinja kutenderedza zvikamu zvekukwezva, zvirevo zvekukanzura uye mubhadharo, zvikamu zvekuverenga mabhuku, zvikamu zvemitero yeboka nemakomisheni. Kunyangwe ichifamba pamwe nekukurumidza nekukurumidza kupfuura kare, majekiseni anga achangobva kupihwa zvakanyanya uye vanoronga vanoramba vakangwarira nezvekugadzirisazve misangano munguva pfupi. Vazhinji vanowana nyaradzo muBenchmark's Musangano Accelerator Chirongwa chakatangwa kutanga kwechirwere, icho chakapa zero kukwezva kana kubhadharisa mari uye zero njodzi mukuverenga zvekare kusvika munaKurume 31 wegore rino. Varongi vanonyatsoziva izvo indasitiri yanga ichipfuura, uye vane shungu dzekuve mubatsiri - kunyanya kune iwo mahotera anga aine nyasha nemitemo yekudzima uye akaramba achingoshanda.
Bonus Trend - Kukosha Kwekuenda
Chiitiko chekuenda uye chirongwa chekuenda ndicho chinhu chakanyanya kukoshesa gore rino, kunyanya kutyaira-munzvimbo dzaunopa mukana wakakura wekufambisa. Muchokwadi, ruzivo rwekuenda pamwe haruna kumbove rwakakosha zvakanyanya! Kudzika kwakadzika muzvinhu zvetsika zvemuno zvekuenda kuri kukumbirwa nevarongi, sezvo nzvimbo zhinji dzichipa nzvimbo dzakashama dzakasarudzika dzinodiwa pakufambidzana kwevanhu, runyararo, zororo uye kuchengeteka pasi zviitiko zvezviitiko / zviitiko zvinogona kuve zvinoenderana nezvinodiwa neboka. Mahotera ane zvirongwa zvehutano ari kupa mapoka emisangano: Ruzivo, Wellness & Kuzvitarisira, Kurapa uye Kunyudzwa mune zvakasikwa, kusanganisira zviitiko zvekushambadzira. Uye, semakamuri emusangano wekunze, haugone kukunda maonero!
Bonus Trend - Mweya kuburikidza neChikwata Kubatana!
Pangangove pasina kumbove nekushaiwa kukuru pane muna 2021 kwe teambuilding programming. Mushure memwedzi yakawanda yekubuda kunze kwemusha uye kubatana nevatinoshanda navo nevatengi zvirinani, pane chishuwo chekuuya pamwechete, kubatanidzazve, kuvaka zvakare timu uye kumutsidzira mweya wechikwata. Icho chinhu chinodiwa nevanhu. Iko kudiwa kwekuzviitira kunze, kupihwa nguva, kwakanakira teambuilding uye zvirongwa izvi zviri kukumbirwa nesimba. Orvis Fly Fishing, Land Rover Driving Chikoro, falconry, kukwira, gorofu, Yakarasika Shaker yeMunyu scavenger hunts, margarita mixology makosi, Continental Drifter makadhibhokisi chikepe regattas, Flip-flops & Tie-dhayi Rudzi rwezuva, coconut bowling, demo kukanda… Chero chipi zvacho chinopa timu mukana wekusununguka, kubatanidzazve, kugovana uye kuongorora zviitiko zvekumutsiridza, kuwana ushingi, uye pamwe kuridza rwizi.